विरोध कि समर्थन ?- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
आइरिस ब्यान्ड यु–टुको १४ औं स्टुडियो एल्बम ‘सङ्स अफ एक्सपिरियन्स’ कस्तो छ त ? :
मंसिर २२, २०७४ हिमेश
काठमाडौं — जति बेला तिमी राम्री देखिन्छौतिम्रो अनुहारका पीडा देखिन्नजति बेला तिमी साँच्ची राम्री देखिन्छौत्यो तिमीलाई पनि थाहा हुन्न
जति बेला तिमी राम्री देखिन्छौ
तिम्रो अनुहारका पीडा देखिन्न
जति बेला तिमी साँच्ची राम्री देखिन्छौ
त्यो तिमीलाई पनि थाहा हुन्न
यस्तै–यस्तै अर्थ बोक्छ, यु–टुको भर्खरै रिलिज भएको नयाँ एल्बम ‘सङ्स अफ एक्सपिरियन्स’ को प्रमुख गीत यु आर द बेस्ट थिङ एबाउट मीको सुरुआती अंशले । अहिले विश्व संगीत यही यु–टुको नयाँ एल्बमको पछाडि लागेको छ । यस्तो नहोस् पनि किन र ? यदि गम्भीर संगीत सुन्नु छ, राम्रा शब्दमा डुब्नु छ भने यु–टुबाहेक अर्को विकल्प कहाँ तयार छ र ? यसकै एउटा अर्को उदाहरण हो– यु आर द बेस्ट थिङ एबाउट मी, खुबै स्वादिलो गीत छ यो ।
सङ्स अफ एक्सिपिरियन्स आइरिस ब्यान्ड यु–टुको १४ औं स्टुडियो एल्बम हो, जुन डिसेम्बर १ मा रिलिज भयो । यो कस्तो एल्बम हो त ? यसका लागि ब्यान्डको पछिल्लो अर्को एल्बम ‘सङ्स अफ इनोसेन्स’ लाई पहिले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो किन भन्दा अहिलेको एल्बम त्यसकै अर्को भाग भन्दा हुन्छ अथवा त्यसकै जोडी । सन् सत्तरीमा डब्लिनतिर स्थापना भएको यु–टुका सुरुआती गीतमा त्यति बेला आयरल्यान्डमा चलिरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलनको पूरा भाव पाइन्छ ।
त्यसैले यु–टुको विरोध गर्ने पनि धेरै छन् । अहिलेको एल्बमलाई मन परेन भन्ने पनि धेरै निस्किसकेका छन् । ब्यान्डका फ्रन्टम्यान बोनोसँग विचार नमिल्ने पनि उत्तिकै छन् । तर एउटा तथ्य के हो भने जस्तै भए पनि यु–टुका गीत र एल्बमलाई हेर्दै नहेर्ने र सुन्दै नसुन्ने भने गर्न सकिन्न । अहिलेको एल्बम ‘सङ्स अफ एक्सपिरियन्स’ को विशेषता पनि यही हो । ‘सङ्स अफ इनोसेन्स’ निस्कँदै अब ‘सङ्स अफ एक्सपिरियन्स’ पनि निस्कनेछ भनेर त्यसै बेला जनाउ दिइसकेको थियो ।
खासमा यस एल्बमका गीत बोनोले लेखेका चिठीको संग्रह जस्तै हो, जुन उनले आफ्ना खासै धेरै नजिक भएकालाई लेखेका थिए । उनले त्यस चिठीमा मनको भाव पोखेका छन् । केही अगाडि बोनो आफैं अविश्वसनीय ढंगले साइकल दुर्घटनामा परेका थिए, धेरैलाई त्यो सम्झना हुनुपर्छ । अहिलेको एल्बमका गीत लगभग त्यसयता तयार भएका हुन् । यो वर्षको सुरुमै यो एल्बम रिलिज गर्ने योजना पनि थियो, तर पछाडि सारियो । कारण के त ?
ब्रेक्जिट र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको नतिजा । यु–टुका लागि दुवै अनपेक्षित जस्तै थियो । विशेषत: बोनोका लागि । त्यसैले लगभग तयार भइसकेका गीतलाई उनले फेरि
पुनर्लेखनको प्रयास गरे । उनी चाहन्थे, यो एल्बमका गीतमा राजनीतिक स्वाद पनि रहोस् । एल्बमको मुख्य गीत यु आर द बेस्ट थिङ एबाउट मी भने सेप्टेम्बरमा नै रिलिज भइसकेको थियो । यसको उद्देश्य आफ्नो नयाँ एल्बमको चर्चा होस्, प्रोमोसन होस् भन्ने नै थियो ।
सन् १९७६ तिर ब्यान्ड स्थापना भएको थियो र ड्रमर ल्यारी मुलेन जुनियनले १४ वर्षको उमेरमा ब्यान्ड बनाउनका लागि स्कुलमा विज्ञापन निकालेका थिए । त्यही विज्ञापन हेरेर अरू तीन जना पनि जम्मा भए, बोनोसँगै द एजे र एडम क्लेयटन । बोनोको स्वर, द एजे गितारमा अनि क्लेयटनको जिम्मेवारी बासमा । यी सबै ४० वर्ष अगाडिका प्रसङ्ग हुन्, जुन ब्यान्डबारे चर्चा गर्दा फेरि दोहोर्‍याएर आउने गर्छ । यति धेरै वर्षपछि पनि यो ब्यान्डको लोकप्रियता किन उस्तै छ त ? यसको एउटा उत्तर हुन सक्छ, यही नयाँ एल्बम ‘सङ्स अफ एक्सपिरियन्स’ ।
प्रकाशित : मंसिर २२, २०७४ ०७:५४
मंसिर १५, २०७४ सुशील पौडेल
काठमाडौं — महिलालाई सौन्दर्यको पर्याय मात्रै मानिँदासम्म फिल्म क्षेत्रमा नायिका आयु लामो हुँदैन । उमेरले ३० नकट्दै थुप्रै नायिका पलायन भएका उदाहरण छन् । सायद, पलायन हुन नपरोस् भनेर यतिबेला अधिकांश चल्तीका नायिकाहरू फिल्म निर्माणतर्फ लागेका छन् ।
सिर्जना बस्नेत, मौसमी मल्ल, सुस्मिता केसी, करिश्मा मानन्धर, ऋचा घिमिरेले सुरु गरेको निर्माताको लाइनमा यतिबेला नयाँ नायिकाहरू थपिने क्रम जारी छ । लामो समय फिल्म क्षेत्रको अनुभवका आधारमा पनि नायिकाहरूले अन्य पेसाको सट्टा फिल्मकै अर्को पाटोमा जानुलाई सहज र औचित्यपूर्ण ठानेको बताउँछन् । नम्रता श्रेष्ठ सोल सिस्टर्स, छुल्ठिम गुरुङ डायरीबाट असफल रहे पनि शिल्पा पोखरेलले भने मंगलमबाट निर्माताका रूपमा आंशिक सफलता पाइन् । निर्माताकै रूपमा ऋचासिंह ठकुरी सुपर गोर्खे र अशिष्मा नकर्मी नेवारी फिल्म लाखे भाजु थपिँदैछन् ।
साताअघि मात्रै केकी अधिकारीले फिल्म लभ सासाका लागि यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट नायिकाको समीक्षक समाजद्वारा आयोजित क्रिटिक्स अवार्ड जितिन् । डेब्यु फिल्म स्वरमा गरेको अभिनयदेखि पछिल्ला घामपानी वा ऐश्वर्यमा गरेको अभिनयले केकीलाई नेपाली नायिकामाझ अग्रपंक्तिमा उभ्याएको छ । तर यतिबेला उनी भने कोहलपुर एक्सप्रेसमार्फत निर्माताको लाइनमा समेत उभिएकी छन् । सुटिङ भइरहेको विशाल भण्डारी निर्देशित उक्त फिल्मबाट केकीको नयाँ अध्याय सुरु हुँदै छ ।
नेपाल जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा विवाहपछि नायिकाको करिअरमा लगभग ब्रेक लाग्छ । यो पनि कारण हुन सक्छ, क्रिकेटर शरद भेषावकरसँग विवाह गरेको वर्ष नबित्दै निशाले फिल्म निर्माणमा हात हाल्नु । सौगात मल्ल र बेनिशा हमालको जोडी लिएर बनाइएको
झ्यानाकुटीबाट उनले निर्माणमा समेत आंशिक सफलता हात पारिन् । यसअघि अधिकांश नायिका निर्माणमा असफल भइरहेका थिए ।
कहाँ भेटिएलाका लागि श्रीकृष्ण श्रेष्ठले नायिकाका रूपमा श्वेता खड्कालाई भेटाएका थिए । उक्त जोडी रिलमा त जम्यो नै, यथार्थमा पनि जम्यो । कोहिनूरसम्म आइपुग्दा श्वेताले श्रीकृष्णलाई गुमाउन पुगिन् । तर उनले श्रीकृष्णको फिल्म निर्माणको लयलाई भने टुट्न दिइनन् । यसपटक उनले दयाहाङ राईसँग जोडी बाँध्दै कान्छी मात्रै खेलिनन्, निर्माणसमेत आफैंले गरिन् । अनमोल केसी अभिनीत कृकै रिलिज डेटमा कान्छी ल्याउन खोजिरहेकी छिन् श्वेता ।
हिरोबाट हिरोइन बनेर देखापरेकी रेखाले लामो समय एक नम्बरकी नायिकाका रूपमा राज गरिन् । छविराज ओझासँग विवाह गरेपछि रेखाकै ब्यानरबाट फिल्म निर्माण हुन थाले पनि रेखा भने छविलाई छोडेपछि नै खास निर्माता बनिन् । निर्माणसँगै उनी आफ्नो फिल्मको शीर्ष भूमिकामा पनि आइरहेकी छन् । निर्माताका रूपमा धेरै फिल्म दिने र व्यावसायिक सफलता हात पार्ने नायिकामा पनि रेखा अगाडि नै आउँछिन् । आर्यन सिग्देलसँग अभिनीत पछिल्लो फिल्म रुद्रप्रियाले भने उनलाई सफल बनाएन ।
नायिकाका रूपमा सफल नाम हो, झरना थापा । यिनै झरना यस वर्ष निर्माणसँगै निर्देशक पनि भएर देखा परिन्, ए मेरो हजुर २ मार्फत । यसले उनलाई राम्रै सफलता पनि दिलायो । आफ्नै पति सुनीलकुमार थापासँगको निर्माण सहकार्यले झरनालाई नायिकाबाट निर्माताको बाटोमा टसमस हुन दिएन । फिल्ममा भने उनले साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र सलिनमान बानियाँको जोडीलाई उतारेकी थिइन् ।
फस्ट लभदेखि अभिनयलाई प्रिय बनाएकी ऋचा बेलाबखत को आफ्नो होस् वा सुनकेशरी मार्फत आफूलाई एक्सपेरिमेन्ट गरिरहन्छिन् । ब्लकबस्टर्स लुट वा क्रिटिकल्ली एक्लेम्ड टलकजंग भर्सेज टुल्के र उमाजस्ता फिल्म दिएकी ऋचा पनि पछिल्लोपटक निर्माताको लाइनमा आएकी छन् । अर्पण थापासँग मिलेर आधा लभ निर्माण गरे पनि यसले उनलाई निर्माताका रूपमा भने सफलता दिलाएन तर फिल्म निर्माणको जोस भने उनमा अझै यथावत् छ ।
प्रकाशित : मंसिर १५, २०७४ ०९:१३
७ करोड ट्वीटर एकाउन्ट डिलिट
फेनिक्स ल्याउँदै मोजिल्ला
विश्वकप २०१८: फुटबलले रुसलाई दिएको खुसी